Ubuntu 22.04 inosvika iine Linux 5.15, Firefox sepasuru ye snap | Linux Addicts
pablinux | 22/04/2022 13:22 | Yakagadziridzwa ku 22/04/2022 13:25 | Kugoverwa, Noticias
Mazuva maviri apfuura, mumwe wangu Diego akanyora maererano naJammy Jellyfish ingave inonakidza kuburitswa. Zvadaro Ubuntu 22.04 Zviri pano uye tese tinogona kuzviongorora. Canonical inovandudza Ubuntu, asi zvakare iri kumashure kwevamwe vanomwe, tichiverenga iyo Kylin iyo yakarongerwa musika weChinese. Iyo huru vhezheni ndiyo iyo pasina mubvunzo inouya neakanyanya-inobata shanduko, sezvo shanduro yeGNOME yakasvetuka, saka mune iyi vhezheni zvese zvitsva zvegore rapfuura zvinosanganisirwa padesktop.
Ubuntu 22.04 inosvika ne GNOME 42. Yechitatu vhezheni mushure mekubva ku3.38 kuenda ku40 inoita seyapedza basa rakatanga gore rapfuura ikozvino, uye inosanganisira akawanda maficha matsva, pakati peiyo yakakosha kuvandudzwa kwekuita. Uye zvakare, maapplication matsva akaunzwa, senge new screenshot turusi iyo inobvumidza iwe kurekodha desktop yako. GNOME zvakare ine chinyorwa chitsva mupepeti, asi Canonical yafunga kunamatira Gedit.
1 General nhau
2 Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish inobata
3 Kubuntu 22.04: kushanduka kwechisikigo nekutarisa kutsva
4 Lubuntu 22.04 inotisiya nemunzwa muvhu
5 Ubuntu Budgie 22.04, kuchenesa iyo yakanatswa GNOME
6 Ubuntu MATE 22.04 inogamuchira Wimpress inotsvedza pasi
7 Ubuntu Studio 22.04, kugadzira zvirimo neshanduro nyowani
8 Xubuntu 22.04 inoita kuti GNOME mapurogiramu ataridzike zviri nani
9.1 Ubuntu Unity 22.04, mapurogiramu matsva uye rutsigiro rweBIOS uye UEFI
9.2 Ubuntu Cinnamon 22.04, yekutanga kushandisa iyo 5 yakatevedzana
10 Ubuntu 22.04 iri nani kune iyo Raspberry Pi
Ubuntu 22.04 izita reiyo huru sisitimu, asi Jammy Jellyfish ndiyo yakajairika mhando yemhuri yese. Iwo 8 mavhezheni epamutemo, uye ayo asina pamutemo, anogovera zvimwe zvezvitsva zvavo, sekuti ivo vanotsigirwa kwenguva yakareba. Ubuntu 22.04 ichave yemakore mashanu, kusvika Kubvumbi 2027, nepo maflavour epamutemo achange ari emakore 3, kusvika Kubvumbi 2023. Kana iri iyo isiri yepamutemo, inotarisirwa kuve ye3 makore, asi ichave ingangoita kusvika Kubvumbi 2024, panguva iyo ivo vachaburitsa inotevera vhezheni LTS. .
Kana zviri zvimwe zvikamu, vese vachashandisa Linux 5.15, rutsigiro rweRaspberry Pi rwakavandudzwa nekuda kwekushandiswa kwezswap, uye mapakeji mazhinji akagadziridzwa, senge PHP 8.1, OpenSSL 3.0, Ruby 3.0, Golang 1.8, Python 3.10 , GRUB 2.0.6 .11, GCC 22, Mesa XNUMX uye zvakare izvo zvezvikumbiro zvakaita seLibreOffice kana PulseAudio. Firefox inongowanikwa sepasuru yekukurumidza kubva nhasi, saka ikozvino iwe uchagamuchira zvigadziriso zvakananga kubva kuMozilla uye ichave yakachengeteka zvakanyanya, sezvo iri yega (sandbox). Kune rimwe divi, dzimwe nguva zvinotora nguva yakareba kuvhura.
Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish inobata
Ubuntu 22.04 inosvika ne GNOME 42, izvo zvinhu zvakawanda zvinomira pachena, senge chidzitiro chitsva chekushandisa kana kuvandudzwa mune rima dingindira, asi Canonical yaenda mberi zvishoma uye yaenda kumberi kuti ikwanise kushandura ruvara rwekutaura. Zvakare, iyo huru vhezheni inoratidza iyo nyowani logo, zvese kana uchitanga sisitimu yekushandisa uye muGDM iyo yava grey. Pakati pedzimwe shanduko dzatinadzo dzavakasanganisira nekusarudzika mukana wekushandura mapaneru kuita doko, ndiko kuti, "pfupisa" kuitira kuti isasvike kubva kune chikamu kuenda kune chikamu. Nyowani vhezheni ye libadwaita uye GTK4 inosanganisirwawo.
Kubuntu 22.04: kushanduka kwechisikigo nekutarisa kutsva
Kubuntu ndiyo KDE desktop edition yeUbuntu, uye yekutanga yezvinonaka zviri pamutemo kutsigirwa kwe "chete" makore matatu. achashandisa Plasma 5.24.4, ine wongororo itsva seGNOME, KDE Gear 21.12.3 uye Frameworks 5.92. Nekune rimwe divi, iwo makuru maapplication akagadziridzwa, akadai seVLC, LibreOffice kana Firefox, yave kuwanikwa sekukurumidza. Iri sangano rinouya zvakananga kubva kuCanonical, saka pakanga pasina imwe sarudzo. Thunderbird ndiye mutariri wetsamba.
Lubuntu 22.04 inotisiya nemunzwa muvhu
Lubuntu 22.04 ichaodza mwoyo vamwe vashandisi vayo, sezvo ini ndakatoverenga kubva pane zvakataurwa pasocial network. Chinhu chinonyanya kukosha pamusoro pekuburitswa uku idesktop yako, uye 22.04 ichashandisa yakafanana ne21.10, kunyangwe Zvikamu LXQt 1.0 Yave nemwedzi iripo. anogara mukati Zvikamu LXQt 0.17.0. Zvimwe zvacho, uri kukwidziridza kuenda kuQt 5.15.3 uye une zvikumbiro zvakagadziridzwa zvakaita seLibreOffice 7.3.2, VLC 3.0.16, Featherpad 1.0.1 kana Discover 5.24.4.
Ubuntu Budgie 22.04, kuchenesa iyo yakanatswa GNOME
Budgie idesktop ine chikamu yakavakirwa paGNOME, saka kana tikatarisa dhizaini yayo, inoita kunge GNOME kune avo vanoda chimwe chinhu chakashongedzwa. MuBuntu Budgie 22.04 yaenda mberi zvishoma, ichishandisa Budgie 10.6.1 (10.6 manotsi) uye zvikomborero zvayo zvose. Semuenzaniso, kune akawanda matsva maficha muBudgie Applets uye Budgie mini-apps, iyo yekugamuchira application ikozvino inotanga nekukurumidza uye inotitendera kuisa Brave kana Firefox ESR kubva kwairi, mapakeji mazhinji akagadziridzwa mumadingindira, akaturikidzana uye mapikicha.
Nezve mafambiro eiyo sisitimu yekushandisa pachayo, iyo GNOME marongero akatsiviwa ne Budgie Control Center, kwaunokwanisa ikozvino kutonga maprofile emagetsi, uye iwe unogona zvakare kuseta Wallpaper zvakananga kubva kuNemo.
Ubuntu MATE 22.04 inogamuchira Wimpress inotsvedza pasi
Ubuntu MATE inoramba iri imwe yeakanakisa sarudzo kune avo vanosarudza kutaridzika uye kuita kwekare Ubuntu. Musoro wepurojekiti ndiMartin Wimpress, uyo kusvika nguva pfupi yadarika aivewo mukuru weBuntu desktop. Ubuntu MATE 22.04 inoshandisa MATE 1.26.1, umo zvinopfuura 500 zvipembenene zvakagadziriswa. Kune rimwe divi, aesthetic novelties akaunzwa, uye ikozvino anoenderana neese maYaru madingindira uye maficha, akadai seruvara rwechimiro.
Yakaunzwa chiedza uye rima panels, yakawedzera AI-yakagadzirwa mapikicha, yakagadziridzwa kuvimbika pakuchinja kana kudzoreredza marongero, yakagadziridzwa MATE Hud nerutsigiro rweiyo injini yemusoro mutsva uye uremu hweISO hwadonha kubva pa4.1GB kuenda ku2.7GB, chimwe chinhu chine musoro. Uye izvo nekuwedzera maapplication matsva nekumisikidza, seClock, Mepu uye GNOME Mamiriro ekunze. Mapasuru makuru nemaapuro akagadziridzwa zvakare, seEvolution 3.44, LibreOffice 7.3.2.1 kana Firefox 99, iyo yava kuwanikwa seSnap.
Ubuntu Studio 22.04, kugadzira zvirimo neshanduro nyowani
Ubuntu Studio iripo kune vanogadzira zvemukati. Kune mavhezheni akati wandei vakatanga kushandisa KDE, asi chikonzero chavo chekuve multimedia application, uye muUbuntu 22.04 Studio Controls 2.1.3, RaySession 0.12.2, Carla 2.4.2, jack-mixer 17, lsp-plugins 1.1.31 inoshandiswa .5.0.2 , Krita 3.8.1, Darktable 1.1.2, Inkscape 7.5.0, Digikam 27.2.3, OBS Studio 21.12.3, Kdenlive 3.0.1, Blender 2.10.24, Gimp 6.9, Ardor 1.5.7 uye 2.0.1. Scribu MyPaint XNUMX.
Xubuntu 22.04 inoita kuti GNOME mapurogiramu ataridzike zviri nani
Xubuntu 22.04 inoshandisa Xfce 4.16, asi yakaunza kuvandudzwa kwechimiro nemadingindira akaita seGreybird 3.23.1 iyo inosanganisira yekutanga tsigiro yeGTK4 uye libhandy, iyo ichaita GNOME mapurogiramu anotaridzika zvakanaka muXubuntu. Mudhipatimendi rimwe chete redhizaini, yekutanga-xfce 0.16 theme yakawedzera akawanda mitsva mifananidzo. Kana zviri zvikumbiro zvakagadziridzwa, vakataura Mousepad 0.5.8, Ristretto 0.12.2 kana Whisker Menu Plugin 2.7.1.
"Remix" ndiro "surname" yakapihwa kumapurojekiti ane masisitimu anoshanda akavakirwa paUbuntu uye anoda kuve pamutemo. Isati yatakurwawo naUbuntu Budgie, anove munin'ina parizvino. Parizvino pane angangoita mana Remixes, uye maviri akatoburitsa mavhezheni akavakirwa paUbuntu 4.
Ubuntu Unity 22.04, mapurogiramu matsva uye rutsigiro rweBIOS uye UEFI
MuUbuntu Unity 22.04 zvinhu zviviri zvinomira pachena: nechinangwa che kunatsiridza dhizaini yese, mucherechedzi wegwaro akatsiviwa neLectern, mupepeti wemavara akatsiviwa nePeni, mutambi wevhidhiyo akatsiviwa neVLC, muoni wemufananidzo wakatsiviwa neEOM, uye system monitor yakatsiviwa neMATE System Monitor. Kune rimwe divi, iyo ISO haichaparadzanisa BIOS neUEFI, saka ISO yakafanana inogona kushandiswa mune ese ari maviri.
Ubuntu Cinnamon 22.04, yekutanga kushandisa iyo 5 yakatevedzana
Ubuntu Cinnamon 22.04 haisanganisire nhau dzakatanhamara, kunze kweiyo yakagovaniswa nezvimwe zvikamu zvemhuri yeJammy Jellyfish uye iyo yava kushandisa ikozvino. Cinnamon 5.2.7.
Ubuntu 22.04 iri nani kune iyo Raspberry Pi
Ubuntu 22.04 ndiyo yekutanga vhezheni yeUbuntu iri yakasimbiswa kune ese mavhezheni eRaspberry Pi, kusanganisira Zero. Izvi zvinodaro nekuti vakavandudza rutsigiro, muchikamu nekuda kwekushandiswa kwezswap.
Pane sarudzo dzekusarudza kubva, asi chinonyanya kukosha ndechekuti Ubuntu 22.04 yasvika uye takatarisana neshanduro itsva yeLTS ine zvakawanda zvitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 22.04 inouya neLinux 5.15, Firefox senge snap package, nyowani desktops seGNOME 42 kana Plasma 5.24, uye yakagadziridzwa rutsigiro rweRaspberry Pi.
HPVM, LLVM Compiler yeCPUs, GPUs, FPGAs, uye Hardware Accelerators.